Fandraisan'anjaran'i Zithal - Wikipedia
De Zithal dinika Laogim-panakanana fampidiram-pejy laogy laogiim-panararaotana
03:121 Oktobra 2020 à 03:12 Fampitahana tant. +28‎ Endolzansy ‎ Rohy sy tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
30 Septambra 2020
20:4530 Septambra 2020 à 20:45 Fampitahana tant. +47‎ Endolzansy ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
20:3430 Septambra 2020 à 20:34 Fampitahana tant. +205‎ Endolzansy ‎ Tsipelina sy rohy Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
20:0530 Septambra 2020 à 20:05 Fampitahana tant. +29‎ Endolzansy ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
20:0030 Septambra 2020 à 20:00 Fampitahana tant. +31‎ Endolzansy ‎ Tsipelina sy rohy Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
24 Septambra 2020
00:0524 Septambra 2020 à 00:05 Fampitahana tant. +149‎ k Kristianisma eto Madagasikara ‎ Rohy Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
23 Septambra 2020
23:5323 Septambra 2020 à 23:53 Fampitahana tant. +257‎ k Kristianisma eto Madagasikara ‎ Rohy sy tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
23:2623 Septambra 2020 à 23:26 Fampitahana tant. +103‎ k Kristianisma eto Madagasikara ‎ Rohy sy tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
19:4523 Septambra 2020 à 19:45 Fampitahana tant. +64‎ Kristianisma eto Madagasikara ‎ Rohy sns Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
19:3823 Septambra 2020 à 19:38 Fampitahana tant. −65‎ Kristianisma eto Madagasikara ‎ Namafa soratra tsy ilaina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
19:3123 Septambra 2020 à 19:31 Fampitahana tant. +63‎ Kristianisma ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
19:1323 Septambra 2020 à 19:13 Fampitahana tant. +3‎ Finoana silamo ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
17:2223 Septambra 2020 à 17:22 Fampitahana tant. +10‎ Silamo eto Madagasikara ‎ Rohy sns Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
17:1723 Septambra 2020 à 17:17 Fampitahana tant. +75‎ Silamo eto Madagasikara ‎ Rohy Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
17:0423 Septambra 2020 à 17:04 Fampitahana tant. +100‎ Silamo eto Madagasikara ‎ Rohy Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
16:5723 Septambra 2020 à 16:57 Fampitahana tant. +47‎ Fivavahana eto Madagasikara ‎ Rohy Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
16:5423 Septambra 2020 à 16:54 Fampitahana tant. +40‎ Fivavahana eto Madagasikara ‎ Tsipelina sy rohy Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
02:5323 Septambra 2020 à 02:53 Fampitahana tant. +56‎ Loteranisma eto Madagasikara ‎ Tsipelina sns Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
02:4623 Septambra 2020 à 02:46 Fampitahana tant. +2‎ Loteranisma eto Madagasikara ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
21 Septambra 2020
23:2621 Septambra 2020 à 23:26 Fampitahana tant. +37‎ Hara-magedona ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
23:1621 Septambra 2020 à 23:16 Fampitahana tant. −1‎ k Ambositra ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
23:1421 Septambra 2020 à 23:14 Fampitahana tant. +7‎ k Ambositra ‎ Endri-tsoratra Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
22:5821 Septambra 2020 à 22:58 Fampitahana tant. −19‎ Ambositra ‎ Rohy Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
22:5021 Septambra 2020 à 22:50 Fampitahana tant. −23‎ Lakroa ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
22:4821 Septambra 2020 à 22:48 Fampitahana tant. +34‎ k Hazo fijaliana ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
22:4321 Septambra 2020 à 22:43 Fampitahana tant. +25‎ k Fiteny grika kôine ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
22:4021 Septambra 2020 à 22:40 Fampitahana tant. +32‎ Fiteny grika kôine ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
20:1721 Septambra 2020 à 20:17 Fampitahana tant. +57‎ k Fiteny grika kôine ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
19:2021 Septambra 2020 à 19:20 Fampitahana tant. +1‎ Fiteny grika kôine ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
19:1821 Septambra 2020 à 19:18 Fampitahana tant. +76‎ Fiteny grika kôine ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
19:1121 Septambra 2020 à 19:11 Fampitahana tant. +1‎ k Fiteny grika kôine ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
19:1021 Septambra 2020 à 19:10 Fampitahana tant. +34‎ Fiteny grika kôine ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
19:0521 Septambra 2020 à 19:05 Fampitahana tant. +68‎ Fiteny indô-eorôpeanina ‎ Rohy sy tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
18:5621 Septambra 2020 à 18:56 Fampitahana tant. +11‎ Fiteny indô-eorôpeanina ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
18:5521 Septambra 2020 à 18:55 Fampitahana tant. +50‎ Fiteny indô-eorôpeanina ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
18:5021 Septambra 2020 à 18:50 Fampitahana tant. −2‎ k Iranianina (vahoaka) ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
18:4921 Septambra 2020 à 18:49 Fampitahana tant. +120‎ k Iranianina (vahoaka) ‎ Rohy sy tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
18:3821 Septambra 2020 à 18:38 Fampitahana tant. +20‎ Korda (vahoaka) ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
18:0021 Septambra 2020 à 18:00 Fampitahana tant. −3‎ k Fiteny okrainiana ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
20 Septambra 2020
04:4820 Septambra 2020 à 04:48 Fampitahana tant. +14‎ k Fiteny hebreon'ny Baiboly ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
04:4420 Septambra 2020 à 04:44 Fampitahana tant. 0‎ Fiteny hebreo ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
04:4320 Septambra 2020 à 04:43 Fampitahana tant. +6‎ k Fiteny hebreo ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
04:3920 Septambra 2020 à 04:39 Fampitahana tant. +18‎ k Fiteny hebreo ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
04:3420 Septambra 2020 à 04:34 Fampitahana tant. +70‎ k Fiteny hebreo ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
04:2820 Septambra 2020 à 04:28 Fampitahana tant. +1‎ Fiteny semitika ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
04:2620 Septambra 2020 à 04:26 Fampitahana tant. −8‎ k Fiteny semitika ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
04:2420 Septambra 2020 à 04:24 Fampitahana tant. +92‎ k Fiteny semitika ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
04:1720 Septambra 2020 à 04:17 Fampitahana tant. +4‎ k Fiteny semitika ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
04:0820 Septambra 2020 à 04:08 Fampitahana tant. +18‎ k Fiteny semitika ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
04:0320 Septambra 2020 à 04:03 Fampitahana tant. +107‎ k Fiteny hamitô-semitika ‎ Tsipelina Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:Fandraisan%27anjara/Zithal"